Kungahle kube nokuqhuma kwentaba-mlilo ezweni elifudumele | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kungahle kube nokuqhuma kwentaba-mlilo ezweni elifudumele
Ekuqaleni singacabanga ukuthi ukuqhuma kwentaba-mlilo akunqunywa ukuguquka kwesimo sezulu emhlabeni esihlala kuwo, kepha ngokocwaningo olushicilelwe ephephabhukwini lesayensi i-'Geology 'lembula ukuthi ukuncibilika kwezinguzunga zeqhwa kuthonya umsebenzi wezintaba-mlilo.
Kodwa, Kanjani? Ukwenza leso siphetho sithakazelise ngendlela emangalisayo kuhlolwe umlotha wentaba-mlilo wase-Iceland, eyayigcinwa kuma-peat deposits nasezinhlakeni zamachibi. Ngakho-ke, bakwazile ukubona isikhathi somsebenzi wentaba-mlilo phakathi kweminyaka engama-4500 nengama-5500 edlule.
Ngaleso sikhathi, kwaba nokwehla okuphawulekayo kwezinga lokushisa, okwadala ukuthi izinguzunga zeqhwa zikhule ngokushesha. Leli qiniso "lingaqinisekisa" izintaba-mlilo. Noma kunjalo, Lapho iplanethi ifudumala futhi, inani lezintaba-mlilo zanda.
»Lapho izinguzunga zeqhwa zihlehla, ingcindezi esemhlabeni iyancipha. Lokhu kungakhuphula ukuncibilika kwesambatho, futhi kuthinte nokuhamba kwenani lemagma elingasekelwa uqweqwe, 'kuchaza uSolwazi u-Ivan Savov wase-University of Leeds, ongomunye wababhali abasebenzisana nalolu cwaningo.
Into emangaza kakhulu ukuthi ngisho nezinguquko ezincane ekucindezelekeni komhlaba zingashintsha amathuba okuqhuma kwentaba-mlilo embozwe yiqhwa. Esinye futhi isizathu sokuthatha noma yiziphi izinyathelo ezidingekayo ukuvimbela izinga lokushisa lomhlaba jikelele ukuthi lingakhuphuki ngaphezu kwama-2 degrees Celsius ngasekupheleni kwekhulu leminyaka.
Uma singenzi lutho, incibilikisi ngeke isishiye ngaphandle kwemithambeka emnandi yokushibilika eqhweni, okwamanje, esingabuthokozela njalo ebusika, kepha ngaphezu kokujwayela ukuhlala nesomiso esikhulu nezikhukhula, kuzofanele senze okufanayo nokuqhuma intabamlilo, okuthile okungaba nzima kakhulu.
Ukuze ufunde isifundo esigcwele, ungenza chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Kungahle kube nokuqhuma kwentaba-mlilo ezweni elifudumele